လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ လွဲမှားခြင်း ဒဏ္ဍာရီ(၂) | ဥက္ကာကိုကို
လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ လွဲမှားခြင်း ဒဏ္ဍာရီ(၂)	Posted by oakkarkoko on August 6, 2012
Posted in: သရော်စာ, အက်ဆေး, ရောက်တတ်ရာရာ, ၀တ္ထု.	3 Comments
သတင်းမီဒီယာလောကထဲကို ၂၀၀၇ ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ကျနော်စရောက်သည်။ဂျာနယ်မှာ ကြေငြာထားတဲ့ အလုပ်ခေါ်စာကိုဖတ်ပြီး ဘုမသိဘမသိ အလုပ်သွားလျှောက်တာဖြစ်သည်။အလုပ်မ၀င်ခင် ထုံးစံအတိုင်း အင်တာဗျုးဝင်ရသည်။
အင်တာဗျုးမယ့်နေ့ကိုမှတ်ထားပြီး အဲဒီနေ့မှာ ကျနော် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်စားကာ အင်တာဗျုးဖြေရန် သွားလိုက် သည်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆိုပေမယ့် တခြားလူတွေနဲ့စာရင် ကျနော်က သူတောင်းစားရုပ်ထွက်နေသေးသည်။ ခေါ်တာကသတင်းထောက်ငါးယောက်တည်းဆိုပေမယ့် လာလျှောက်ကြတာ လူတစ်ရာနီးပါးရှိသဖြင့် နှစ်ရက်ခွဲဗျူးရသည်။ ကျနော့် အလှည့်ရောက်လို့ အင်တာဗျုးခန်းထဲရောက်တော့ အသားအနည်းငယ်မည်းသော လူတစ်ဦးမျက်နှာထားမည်းမည်းတင်းတင်းဖြင့် ထိုင်နေသည်။
သူ့နာမည် ဦးမျိုးသာထက်(ယခု ကိုချို- BBC) – http://www.facebook.com/mthtet?ref=ts ဖြစ်ကြောင်း အပြင်မှာကတည်းက ကျနော်ကြားခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သည်။ သူက ကျနော့် ကို စဗျုးသည်။ သူမေးသောမေးခွန်းများနှင့် ကျနော့်အဖြေများမှာ မှတ်မိသလောက်ရေးပြရလျှင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် သည်။
(အင်းစိန်ဂိတ်စမှ ၄၅ကားစီးပြီး ဆူးလေဂိတ်ဆုံးအထိသွားတတ်ကြောင်း ကျနော်ကဆိုလိုတာဖြစ်သည်)
“၀ါသနာအရမ်းပါလို့ပါ။ ကျနော်က ငယ်ငယ်ကတည်းက စပ်စုတတ်ပါတယ်”
(ဒီဒိုင်ယာလော့ခ်တွေက ကျနော့်ကို စာရေးဆရာတစ်ချို့ဝိုင်းသင်ပေးလိုက်တာ)
“ဟင်… (မျက်ခုံးပင့်လိုက်သည်)… ဘယ်တွေမှာရေးဖူးတာလဲ”
“အစုံပါပဲခင်ဗျ… ကျနော်ကဗျာ အပုဒ်ငါးဆယ်ကျော်နဲ့ ၀တ္ထုတိုဆယ်ပုဒ်လောက် ပါဖူးပါပြီ”
“ဟာ… ဒါဆို မင်းသတင်းထောက်လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးကွ”
“သတင်းထောက်အလုပ်နဲ့ စာရေးဆရာနဲ့မဖြစ်ဘူးကွ… တခြားစီပဲ၊ တူမှမတူတာ”
“ကျနော် တကယ်ဝါသနာပါလို့ပါဆရာ… ”
“ထားပါတော့ကွာ.. ဒါနဲ့ မင်းငါဘာလဲ သိရဲ့လား”
“ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်.. ဆရာကအယ်ဒီတာပါ”
“ဟေ့ကောင်.. အယ်ဒီတာမဟုတ်ဘူး… ဒု-အယ်ဒီတာချုပ်ကွ၊ မင်း ငါ့ကိုရာထူးလျှော့နေတာလား”
နောက်ရက်အနည်းငယ်နေတော့ 7DayNews ကိုကျနော်ဖုန်းဆက်ပြီး အင်တာဗျုးအောင်မအောင် မေးကြည့် သည်။ အဖြေက သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ မအောင်ပါဘူးတဲ့။ အလုပ်ခန့်လိုက်တဲ့ငါးယောက်တောင် အလုပ်ဆင်းနေတာ သုံးလေးရက်ရှိဘီဆိုပဲ။
ကျနော်စိတ်ဓာတ်တွေ ဘုန်းခနဲပြုတ်ကျသွားသည်။ ကမန်းကတမ်းပြန်ကောက်ထားလိုက်ရသည်။
ထို့နောက်မှာတော့ အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းများဖြင့် 7Day က သတင်းထောက်နှစ်ယောက် ပြန်ခေါ်ပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျနော်ပါသွားသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ကျနော် သတင်းထောက်စဖြစ်သည်။ ပလို့ဂျိ… ဟု ကြွေးကြော်ကာ သတင်းမီဒီယာလောကထဲ
ကျနော် ခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်၏။ အကျမတော်သောကြောင့် ခုချိန်ထိ ထော့နဲ့ထော့နဲ့ဖြစ်နေ၏။
သတင်းထောက်စဖြစ်ကာစက ဦးမျိုးသာထက်နှင့် ကျနော်။
သတင်းထောက်မလုပ်ခင်ကတည်းက စာပေရေးသားခြင်းဖြင့် ထမင်းငတ်နေခဲ့သော ကျနော်သည် သတင်းအရေးအသားဆိုင်ရာပညာရပ်များကို အတော်အတန်ကြိုးစားပမ်းစား လေ့လာသင်ယူခဲ့ရပါသည်။
ရသစာပေရေးသားခြင်းနှင့် သတင်းရေးသားခြင်းတို့မှာ မိုးကြိုးနှင့် အီးပမာဖြစ်သည်။ မြည်သံစွဲအလင်္ကာအရ ဖော်ပြရလျှင် ““ဂျိန်း”” နှင့် ““ဘူ…”” တခြားစီဖြစ်သည်။
တစ်နေ့ မနူးမနပ်သတင်းထောက်ကလေး ကျနော် သတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရသည်။ မထူးဆန်းသော ဓာတ်ပုံပြပွဲသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
သတင်းအကြောင်းအရာက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မဇ္စျိမဒေသရှုခင်းဓာတ်ပုံများကို ရွှေတိဂုံဘုရားတွင် ပြသသော ပွဲဖြစ်သည်။
အဲဒီအကြောင်းအရာလေးကို ကျနော်စကားလုံးရှာမရဘဲ တိုင်ပတ်နေခဲ့သည်။
မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာဒေသ… ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းထက်လည်းပိုရမည်။ ဒေသစာရီကြွချီရာဒေသလည်းမဟုတ်။ သီတင်းသုံးတော်မူရာဒေသလည်းမဟုတ်။ ဖွားမြင်ရာ၊ ဘုရားဖြစ်ရာ၊ တရားရေအေးတိုက်ကျွေးရာ၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံရာ၊…. ဘာညာ ဘာညာ ဖြင့်
ကျနော် ဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်။ အားလုံးကိုခြုံငုံမိအောင် ရေးသားချင်တာဖြစ်သည်။
ထို့နောက်… ကျနော်မျက်စိစုံမှိတ်ကာ ဒီလိုလေး ရေးချလိုက်သည်။
သတင်းအယ်ဒီတာတွေက ကျနော့်အသုံးအနှုန်းကို သဘောကျပြီး မာန်မဲဆူပူကြသည်။ ပြီးတော့ သူတို့အချင်းချင်းလည်း ဆက်တိုင်ပတ်ပြန်ကြသည်။
ယခုထက်ထိ ထိုအသုံးအနှုန်းကို ဘယ်လိုသုံးရပါ့..ဟူ၍ ကျနော်တွေးမိတုန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော့်စီနီယာ အကြီးတန်းသတင်းထောက် မမြတ်စုမွန် နယ်ဖက်ခဏဆင်းသွားတုန်း ကျနော် သူ့သတင်းစားကျက်ကို ၀င်လုသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဟု လူသိများပြီး YCDC ဟု စာလုံးကြီးများကပ်ထားသော ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်
မြို့တော်စည်ပင်ဌာနကြီးကို ၀င်လုတာဖြစ်သည်။ ၀င်လုတာဆိုလို့ တမျိုးမထင်စေလို။ သတင်းထောက်ဆိုတာလည်း လုယက်သူမဟုတ်။ သို့ပေလည်း သတင်းထောက်လောကရဲ့ အချင်းချင်းသတင်းလုယက်မှုက ခါးပိုက်နှိုက်တွေ၊ ဓားပြတွေ၊ အလစ်သုတ်သမားတွေ
မြင်လျှင် ထိုင်ငိုမည့် အကွက်တွေချည်း။ နည်းနည်းလေးမှ အလစ်ပေး၊ အဆက်ပြတ်လို့မရ။ လစ်သွားတာနဲ့ သုတ်ခနဲဆို ကိုယ့်သတင်းရင်းမြစ်ကြီး အမြစ်ကနေကျွတ်ပါသွားပြီသာမှတ်ပေတော့။
အဲဒီလို အကွက်တွေနဲ့ ကျနော် စည်ပင်သတင်းတွေကို လိုက်ခဲ့သည်။ မူလသတင်းထောက်မမြတ်စုမွန်ပြန်ရောက်တော့ သူ့သတင်းရင်းမြစ်ကို ပြန်တောင်းသည်။ ““ပေးမလား.. မပေးဘူးလား”” ပေါ့လေ။
ကျနော်ကလည်း ““လူကိုယူပါ… သတင်းတော့ချမ်းသာပေးပါ”” ဖြစ်နေသည့်အချိန်။ သူ့ခမျာ ကျနော့်ဆီက သတင်းရင်းမြစ်ကြီး ပြန်မရတာနဲ့ စိတ်နာပြီး ယောက်ျားယူသွားရှာသည်။ ကောင်းလေစွ။
အဲဒီလို သူက ယောက်ျားယူပြီး အလုပ်များနေတော့မှ ကျနော် လွတ်လွတ်လပ်လပ် စည်ပင်ထဲဝင်ရသည်။ အဲဒီတုန်းက ခုလိုမျိုး ဌာနမှူးတွေဆီက ဘာသတင်းမှမရ။ သတင်းအားလုံးက မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းလင်းဆီမှာသာ ဖြစ်သည်။
သတင်းထောက်တွေကလည်း အဘ..အဘ..အဘ… တကြော်ကြော်ခေါ်ပြီး မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ကြသည်။ သူကလည်း နဖူးပြောင်လေးကို ပွတ်ကာပွတ်ကာဖြင့် မေးသမျှဖြေသည်။ တောင်းသမျှပေးသည်။
သူ့အချစ်တော်သတင်းထောက်တချို့၏ ပြောစကားများက အရေးပါအရာရောက်သည့်ကာလဖြစ်သည်။
““အဘ… ပြည်လမ်းပေါ်မှာ မြန်မာဘီယာကြော်ငြာထားတာ.. မျိုးကြီးနဲ့ သူ့သားလေးနဲ့ တွဲပြီးသရုပ်ဆောင်ထားတယ်။ အဲဒါမဖြစ်သင့်ဘူး။ ကလေးကို အရက်ကြော်ငြာထဲမှာ မထည့်သင့်ဘူးအဘ… အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ””
သတင်းထောက်က ထိုသို့နှပ်ကြောင်းပေးသည်။ မြို့တော်ဝန်ကြီး တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်။
တစ်ခါတစ်ရံ သူစိတ်ကူးယဉ်ထားသည်များကို ထိုင်ပြောသည်။ ရန်ကုန်မှ ညဈေးတန်းဖွင့်မယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ဘယ်လိုလုပ်ပစ်မယ်။ စသဖြင့်ပေါ့လေ။ ကျနော်တို့သတင်းထောက်တွေကလည်း လူကြီးစကားဆိုတော့ အဟုတ်ထင်ပြီး အလုအယက်ရေးသည်။
ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးမှာ စာလုံးမည်းမည်းကြီးတွေဖြင့် ပြဲကားနေအောင်ဖော်ပြကြသည်။ သို့သော်… သူ့အိပ်မက်တွေက xxx ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် xxx မှန်းဆကာတွေးမိတယ် xxx ဖြစ်နေလေတော့ နောက်ဆုံးမှာ သူရော ကျနော်တို့ပါ ပြည်သူ့စောက်ဆဲခံကြရလေသည်။
သူကလည်း ပြောင်ပြောင်ကြီးခံသည်။ ကျနော်တို့ကလည်း ခပ်ပြဲပြဲထည့်သည်။ ဒီလိုနဲ့ မြို့တော်ဝန်ကြီးနဲ့ ကျနော်တို့ သတင်းထောက်တတွေ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတင် အကြီးအကျယ်လေပန်း၍ ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါသည်။ ကောင်းလေစွ။
အဲဒီနေ့က မိုးတွေရွာသည်။ မိုးတွင်းလည်းဖြစ်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့ကြီးက မြောင်းရေတွေကို လမ်းပေါ်အန်ထုတ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ညနေပိုင်း လေးနာရီတိတိမှာ မြို့တော်ခန်းမရှိ မြို့တော်ဝန်ရုံးခန်းသို့ သတင်းထောက်တွေ ရောက်သွားကြသည်။
အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း သတင်းထောက်တွေကို မြို့တော်ဝန်ကြီးက သူ့ရုံးခန်းအတွင်းမှာ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ကျနော်တို့သတင်းထောက်တွေက ညနေလေးနာရီမထိုးမီ သူ့ရုံးခန်းရှေ့မှာ စောင့်ကြရသည်။ ရုံးခန်းထဲမှာက လူကပြတ်သည်မရှိ။ အဲဒီကြားထဲ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း မြို့တော်ဝန်ကြီး အခန်းထဲရောက်ရောက်လာတတ်သော ကောင်မလေးနှစ်ဦးကိုလည်း ထိုင်စောင့်ရသည်။ သူတို့တစ်ကြိမ်ဝင်သွားလျှင် တစ်နာရီခန့်ကြာတတ်သည်။ ၀မ်းအိုဝမ်း(101) ဆံပင်ပေါက်ဆေးကမ်ပနီမှ ဖြစ်သည်။ ကျနော်ကတော့ စည်ပင်စ၀င်ပြီး ခုအချိန်ထိ လေးနှစ်တာကာလအတွင်း မြို့တော်ဝန်ကြီးနဖူး သိပ်ထူးလာတာ မတွေ့ရ။ (ယခုတော့ သူက အီမိုစတိုင် ဖြစ်နေပါသည်။)
ထိုနေ့က သတင်းထောက်တစ်ဦးက ထမေးသည်။
““အဘ.. မြို့တွင်းမှာ မြောင်းရေတွေအရမ်းလျှံနေတယ်… အဲဒါ အဘတို့ ဘယ်လိုစီစဉ်ထားပါသလဲ””
““မိုးတွင်းမှာ မြောင်းရေလျှံတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပဲ။ ဒါကို လာမေးမနေပါနဲ့။ မိုးရွာမယ်။ ရေလျှံမယ်။ ဒါ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပဲလေ””
မြို့တော်ဝန်ကြီးက အဲဒီလိုခပ်မာမာပြောလိုက်တော့ သတင်းထောက်တွေ ခပ်ကုပ်ကုပ်ဖြင့် တခြားသတင်းတွေ ပြောင်းမေးကြသည်။ ကျနော်က အဲဒီစကားလေးကို စာအုပ်ထဲရေးမှတ်ထားလိုက်သည်။ ရုံးပြန်ရောက်တော့ ချက်ချင်းကောက်ရေးသည်။
သတင်းက Source တစ်ခုတည်း။ မြို့တော်ဝန်ကပြောသည်။ ဒါပဲ။ တခြားကုဒ်တွေလည်းမပါ။ လေးပိုဒ်တည်း။ ဂျာနယ်ထွက်တော့ စာလုံးအကြီးကြီးဖြင့် ပါလာသည်။
““မိုးတွင်းတွင် မြောင်းရေလျှံမှုမှာ သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကိစ္စဟု မြို့တော်ဝန်ပြော””
စာဖတ်သူတချို့ဝိုင်းဆဲကြလေ၏။ မြို့တော်ဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ ပါးစပ်က ဒီလိုထွက်ရပါ့မလားဆိုပြီး။
ဂျာနယ်ထွက်တဲ့အပတ်မှာပဲ မြို့တော်ဝန်ရုံးခန်းသို့ ကျနော်တို့ ရောက်ကြပြန်သည်။ သတင်းတွေ မေးမြန်းနေရင်းနှင့်ပင် ဘယ်သူကဘာပြောလိုက်မှန်းမမှတ်မိတော့။ မြို့တော်ဝန်ကြီး ရှူးရှူးရှဲရှဲဖြစ်လာပြီး အနားမှာရှိတဲ့ ဂျာနယ်နှစ်စောင်ကို ကောက်ကိုင်သည်။
““ဒီဂျာနယ်နှစ်စောင်ကို သေချာသိမ်းထားတယ်။ ငါ့ကိုဆော်ထားတာ။ မကျေဘူး”” တဲ့။ ကြည့်လိုက်တော့ Weekly Eleven နှင့် 7Day News။ ကျနော်တို့ရေးမှန်းတော့ သူမသိ။ စိတ်ထဲမှ အဟိ..အဟိနှင့် ပင် Weekly Eleven ဂျာနယ်မှ မအိရွှေစင်ဝင်းနှင့်
ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်မှ မဝေမာသိမ့်တို့ကို လှမ်းကြည့်တော့ သူတို့ကလည်း ပြုံးစိစိဖြင့် ပြန်ကြည့်သည်။ ခုတော့ ကျနော်တို့အချစ်တော် မြို့တော်ဝန်ကြီးလည်း ရာသီအပြောင်းမှာ နှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်ပြီး တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်
မြို့တော်ဝန်ဟောင်း ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းလင်း။ ယခု ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးအောင်သိန်းလင်း။
(Photo: Oakkar Ko Ko)
ရခိုင်မှာ မိုးတွေရွာပြီး တောင်တွေပြိုသည်။ ရေတွေကြီးသည်။ ချောင်းတွေရေလျှံသည်။ ရွာတွေမြုပ်သည်။ မြို့တွေပေါ်ရေလွှမ်းသည်။ ဖြစ်ပြီး နှစ်ရက်လောက်မှာ သတင်းထောက်ဦးသန်းဌေးနှင့် ကျနော် စစ်တွေကို လေယာဉ်ဖြင့်ရောက်သွားသည်။ စစ်တွေမှ မြောက်ဦးသို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ခရီးနှင်ကာ ရေလွှမ်းသည့် ဒေသများသို့ တစ်မြို့ဝင်တစ်မြို့ထွက် သတင်းယူကြသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ သတင်းယူပြီးတော့ တောင်ပိုင်းဒေသဖက်သို့ သင်္ဘောဖြင့် ဆက်ထွက်ကြသည်။ သံတွဲကိုရောက်သည်။ ဂွမြို့သို့ခရီးဆက်မည်ဟုကြံကာ သံတွဲတွင် တစ်ထောက်နား၏။
သံတွဲမြို့ပေါ်တွင် ပြောင်းလဲမှုတချို့ကိုတွေ့သည်။ အင်တာနက်ဆိုင် သုံးလေးဆိုင်ပေါ်ပေါက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီထဲက အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကိုစည်သူအောင်နှင့်သွားတွေ့ကြသည်။ ကိုစည်သူအောင်ကို ရန်ကုန်ဘားကမ့်ပွဲတွင်
WordPress အကြောင်း လာရောက်ဟောပြောစဉ်က တစ်ကြိမ်ဆုံဖူးပြီး ခုမှနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ သူနှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကာ သူဆောင်ရွက်နေသော အင်တာနက်ကိစ္စများအကြောင်း မေးမြန်းကြသည်။ သံတွဲမှာ အင်တာနက်ဆိုင်စဖွင့်စဉ်က အခက်အခဲများစွာကြုံရသည်ဟု သူကဆိုသည်။ အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်သော်လည်း သုံးတတ်သူမရှိသောကြောင့် အင်တာနက်သုံးနည်းအခမဲ့သင်တန်းပေးပါမည်ဟူ၍ မြို့အနှံ့လိုက်လံကာ ကြေငြာရသည်ဟု သိရသည်။
နောက်နေ့ကျတော့ သူ့ကို ဒေသအာဏာပိုင်တွေက လာရောက်တားမြစ်သည်။ အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ အင်တာနက်သုံးနည်းသင်တန်းပေးခြင်းတို့သည် နယ်မြေလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေသဖြင့်….. အစချီကာ သြ၀ါဒပေးကြသည်ဟူ၏။ ထိုသို့သောအခက်အခဲများကြားထဲကပင် သူက အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရအောင်ဖွင့်သည်။ ဟိုတယ်တွေကို ၀က်ဘ်ဆိုက်ရေးဆွဲပေးသည်။ သံတွဲတစ်မြို့လုံးကို ၀ိုင်ဖိုင်လွှင့်ပေးလိုက်သည်။
မေးမြန်းရင်းနှင့်ပင် သူက ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့်အရာတစ်ခုကိုပြောပြသည်။ ငပလီကမ်းခြေတွင် ၀ိုင်ဖိုင်လွှင့်မည်ဟူသည့် အကြောင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီဟာလေးကို ရေးမှတ်ထားလိုက်သည်။ နောက်နေ့တွင် ကျနော်တို့ ငပလီတစ်ဖက်ကမ်းရှိ
သဗြုချိုင်ဆိပ်ကမ်းသို့ သတင်းသွားယူသည်။ ဆိပ်ကမ်းတွင် ရပ်နားထားသော သင်္ဘောကြီးများကို ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ သဗြုချိုင်ဆိပ်ကမ်းသည် မင်းမဲ့နယ်မြေသဖွယ်တည်ရှိနေသည်ကို တွေ့ကြရသည်။ ဆိပ်ကမ်းတစ်လျှောက်လုံး အရက်ဆိုင်များက
တန်းစီမင်းမူနေသည်။ ဆိုင်တိုင်းတွင် အတိုအပြတ်၊ အဟိုက်အကွဲ မိန်းကလေးများစွာ ထိုင်နေကြသည်။ ဘယ်ဆိုင်ဝင်ဝင် လူတစ်ဦးဘေးမှာ မိန်းကလေးတစ်ဦး လာထိုင်မြဲဖြစ်သည်။ အရက်ငှဲ့ပေးသည်။ ကျီစယ်ပွတ်သပ်သည်။ ကလူ၏သို့ မြူ၏သို့ ပြုသည်။ ဟိုပွတ်ဒီသပ်
လုပ်သည်။ စိတ်ပါလျှင် ဆိုင်နောက်ဖက်တွင် အခန်းငယ်များပင်ရှိသည်ဟူ၏။
နယ်မြေဆိပ်ကမ်းတာဝန်ခံများကို မေးကြည့်ရသည်။ ဦးကိုကိုကြီးဟူသည့် ရေတပ်အရာခံဗိုလ်ကြီးဖြစ်သည်။ သူက ခပ်ပြုံးပြုံးပင်ပြောသည်။
““ဒီမှာက သင်္ဘောသားတွေချည်းပဲ။ သင်္ဘောတွေလည်း အမြဲဝင်ထွက်နေတာ။ သင်္ဘောသားတွေက သိတဲ့အတိုင်းပဲဗျ။ စစ်သားထက်ဆိုးတယ်။ မိန်းမ ငတ်နေကြတာ။ ဒီလိုမျိုး မိန်းကလေးတွေကို ခွင့်ပြုမထားပေးရင် နယ်ခံအမျိုးသမီးတွေ အကုန်လုံး
မုဒိန်းကျင့်ခံရမှာပေါ့”” တဲ့။ ရှင်းသည်။ မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများကိုမေးကြည့်တော့ သူတို့က ပဲခူးဖက်က အများဆုံးလာကြတာပါ တဲ့။
အဲဒီလိုနဲ့ နေ့တစ်ဝက်ခန့်နေပြီး ဆိပ်ကမ်းမှပြန်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ စက်လှေပေါ်မတက်မီ ဆိပ်ကမ်းမှာတွေ့ရသော မီးပြတိုက်ကြီးကို လက်ကမြင်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လာခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ ပါလာတဲ့သတင်းတွေထိုင်ရေးရသည်။ အိုင်တီသမားကြီး စည်သူအောင်ပြောလိုက်တဲ့ ငပလီကမ်းခြေမှာ ၀ိုင်ဖိုင်လွှင့်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလည်းပါတာပေါ့လေ။
ဂျာနယ်ထွက်လာတော့ သံတွဲသတင်းတွေအများကြီးပါလာသည်။ ကိုစည်သူအောင်ပြောတဲ့ သတင်းလည်းပါသည်။ ခေါင်းစဉ်က ““ငပလီကမ်းခြေတွင် ၀ိုင်ဖိုင်လွှင့်တော့မည်”” တဲ့။ သတင်းက ရေးထားတဲ့အတိုင်း။ ဆင်ဆာအဖြတ်အတောက်မရှိ။ ကွက်တိ။
လွဲတာမှ အကြီးကြီးလွဲသည်။ ငပလီကမ်းခြေတွင်ဝိုင်ဖိုင်လွှင့်မည်ဆိုတဲ့ သတင်းဘေးမှာ ဓာတ်ပုံပါ တွဲပြထားသည်။ ဓာတ်ပုံအောက်က ပုံစာထိုးထားသည်က ““ ငပလီကမ်းခြေတွင် တပ်ဆင်ထားသော ၀ိုင်ဖိုင်တိုင်”” တဲ့။
ကြည့်လိုက်တော့… ဟိုက်ရှားဘား…. ကျနော် လက်ကမြင်းလာသည့် မီးပြတိုက်ကြီး။ နည်းတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်။ လူက ရယ်ချင်သလိုလို… ကချင်သလိုလို… ငိုချင်သလိုလို ကနွဲ့ကလျကြီးဖြစ်ပြီး ချက်ချင်းပဲ အရူးမီးဝိုင်းလိုက်ရတော့မလိုလို၊ မပဋာပဲ
တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်လာမေးကြသည်။ ဟရောင်… မင်းရဲ့ ၀ိုင်ဖိုင်တိုင်ကြီးက ကြီးလှချည်လား။ ဘာညာသာရကာဖြင့် လှောင်ကြသည်။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဒီဇိုင်းဆရာကို သားရေကွင်းဖြင့် ပစ်သတ်နေသည်။
သံတွဲမှလည်း ဖုန်းတွေဝင်လာသည်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ… ဒါလေးတောင်မသိဘူးလား။ မီးပြတိုက်ကြီးကို စော်ကားတာလား။ မရှက်ဘူးလား… စသဖြင့် ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းကြသည်။
အင်တာနက်ပေါ်တက်လိုက်တော့ ဂျီတော့ခ်မှာ ကိုစည်သူအောင်နှင့်တွေ့သည်။ သူက ကျနော့်ကို ရီပြသည်။ ထို့နောက် ပြောသည်။
““ဟေ့လူ… ခင်ဗျား နာမည်မပျက်အောင်လို့ အဲဒီမီးပြတိုက်ထိပ်မှာ ကျနော် စလောင်းဖုံးတစ်ခုသွားချိတ်ထားလိုက်ပြီ”” တဲ့။
တေနာကြီး။ ရှက်ပါတယ်ဆိုမှ လာနောက်နေတယ်။ ။
ငပလီကမ်းခြေမှ ၀ိုင်ဖိုင်တိုင်ဟု ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော မီးပြတိုက်ကြီး။
← အနောက်ဖက်ပင်လယ်မှ မီးတောက်များ	လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ လွဲမှားခြင်း ဒဏ္ဍာရီ(၁) →	3 comments on “လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ လွဲမှားခြင်း ဒဏ္ဍာရီ(၂)”
ကံမသား on May 24, 2013 at 9:52 am said:
အားပေးနေပါတယ် ဒါတွေကျတော့အဘfacebookမှာတင်ထားတာမတွေ့ မိသလိုပဲ
Anonymous on April 14, 2013 at 11:44 am said:
Anonymous on August 7, 2012 at 9:01 am said:
မဆိုးပါဘူး ။၀ိုင်ဖိုင်တိုင်နဲ့ လည်းမှားလောက်ပါတယ်။ဟာသ အမြင်နဲ့ ဖတ်ရင် ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ဆက်ရေးပါ။ အားပေးနေပါတယ်။